PVC Fanasan-damba miaraka amin'ny fandriana maranitra China Manufacturer
Description:Heating Mat amin'ny PVC,Hetsiky ny biby fiompy,Fanaraha-maso amin'ny Infrared
Home > Products > Reptile Heat Pad > Under Tank Pad > PVC Fanasan-damba miaraka amin&#39;ny fandriana maranitra
PVC Fanasan-damba miaraka amin'ny fandriana maranitra
Model No.: F034D
Fonosana: Color Card
We are the manufacturer of custom PTC Heating pet mats for amazon and selling it well on amazon.our UL number is E496395.
Ny fitaovana fanamafisam-peo vaovao dia iray amin'ireo fitaovana tena mahomby sy azo antoka ho an'ny fahasalamana ho an'ny reptile sy ny amphibia. Ny raibeny sy ny amphibians dia mangatsiaka ary ao amin'ny toeram-ponenany voajanahary matetika no ampiasain'ny masoandro amin'ny hafanana. Ny Reptilia dia fitaovana fampiasan'ny terrarium izay mampivelatra ireo habaka manjelatra ny masoandro. Izy ireo dia tsara kokoa ny loharanom-pahasalamana 24 ora ho an'ny karazana biby an-tapitrisany sy amphibiana ary ilaina indrindra ho loharano hafanana mandritra ny alina ho an'ny karazam-borona maro. Ny toeram-piantsonan'ny Faritra Infrared Farany dia mety hifikitra hatrany amin'ny terrarium, mamorona fatorana matanjaka ho an'ny famindrana hafanana tsara.Durable.flexible.waterproof. Ny fananganana anti-kovety sy ny fanamafisana ny harena dia mitarika ho amin'ny fiainana serivisy lava. Tena azo antoka tanteraka. Ny serivisy OEM dia misy. Ny vokatra antsika dia natao ihany koa mba hifanaraka amin'ny fenitra CE, RoHS, Ul, ETL.
Product Categories: Pets Heating Pad
Pet Cages no mafana amin'ny CE Contact Now
Heating Mat amin'ny PVC Hetsiky ny biby fiompy Fanaraha-maso amin'ny Infrared PTC Heating Mat amin'ny UL Heating Film amin'ny maso Heat Mat miaraka amin'ny UL PTC Heat Mat amin'ny sokatra Heating Heating ho an'ny puppy